BARBAARINTA EY 3 BILOOD JIR AH - SPENCER THE PIT BULL - EEYAHA
Barbaarinta Ey 3 bilood jir ah - Spencer the Pit Bull
Maalin nolosha kula jirta Spencer Wiishka Mareykanka ee Godka Bull Terrier. Toddobaadka afraad ee Spencer-oo ah 13 toddobaad, 25 rodol, 15 1/4 inji oo dhulka ah illaa barta ugu sarraysa garbaha (qallalaya).
3 bilood jir.
Spence wuu ku sii fiicnaanayaa inuusan eryan bisadaha, si kastaba ha noqotee weli wuu sameyn doonaa haddii uu ku jiro xaalad kacsan oo aanan halkaas u joogin inaan dhahno 'iska dhaaf.' Waxaan u baahnaan jiray inaan dadaal dheeri ah u galo sidii uu keligood uga tagi lahaa, hadda amar fudud oo afka ah ama hal jidh oo aan lahayn ereyo ayaa khiyaamada samayn doona. Haddii Spence uu bannaanka joogo oo aan maqalno inuu bilaabay inuu ciyo waan ognahay inay tahay waqtigii aan u sheegi lahayn cunuggaas inuu ka tago! Xaqiiqda ah in bisaduhu wali halkaan joogaan oo ay ku socon doonaan isaga, oo ay is dul istaagi doonaan ka dib markii Spence uu bilaabay inuu ceyrsado oo nala saxo, waxay ka dhigan tahay in bisaduhu dareemayaan inuu ula jeedo waxyeello dhab ah. Haddii ardaygu damac kale lahaa ka sokow ciyaar ciyaar, aniga i rumee, bisaduhu way ogaan lahaayeen oo iyagu kuma ag wareegi doonaan daarta balbalada isaga u dhow. Kaliya waxaan ubaahanahay xoogaa ka badan bisadahaas si aan ugufiifiyo isaga oo wanaagsan si aan uga caawiyo baritaankiisa!
Spence wuxuu ku socdaa kursiga kumbuyuutarka wuxuuna bilaabayaa inuu ku calaliyo qalabka wax lagu hagaajiyo dhererka. 'Atttt!' Spence kor buu ii soo fiiriyaa oo iska tagaa.
Goor dambe ayaan qabtaa cunuggaas oo bilaabaya inuu wax ku cuno dhinaca dheriga dhirta! 'Attttt!' Spence, qaado laftaan halkii.
Spencer wuxuu ku nasanayay sariirta eeyga markii uu si lama filaan ah u kacay oo uu ugu cararay jikada. Dhowr ilbiriqsi ka dib ayuu la soo laabtay isagoo wata tuwaal warqad ah wuxuuna bilaabay inuu ruugo. Spence, xagee ka heshay tuwaalkaas waraaqda ah? Oo miyaadan arkayn laftaas oo isla sariirtaadii dul taal? Lafaha waxaa loogu talagalay calalinta, ee ma ahan shukumaanno! 'Tuur!' Waxaan qaadaa tuwaalka waraaqda ah waxaanan u dhiibaa laftiisa.
Isbeereeye! Waxaan iskaga tagay flip-flop-ka aan banaanka kula joogo waxa, shan daqiiqo oo aad dhan wada calaliso! Bal eeg waan ogahay inaad kahesho urta quudka laakiin FADLAN, miyaadan arag lafta kaa dambeysa !? Ka tag!
Waan hubaa inaan Amie ku dhejin sariirta eyga sariirtaada. Calaamadaha qaniinyada ayaa ku jira wixii aan ka shakiyay. Ka tag! Halkan, qaado laftan beddelkeeda.
Dhibco ku Calashaan Flip-Flop
Waxaan iskaga tagay lammaanaha aan aadka u jeclahay ee badhtanka dabaqa. Waxoogaa ka dib Spence ayaa ka kacay sariirtii eygiisa oo bilaabay inuu uriyo. Wuxuu ku sigtay inuu baxo laakiin dib ayuu u noqday oo wax kale ayuu urayaa. Isla markii aan arkay afkiisa oo bilaabay inuu furmo, 'HEY!' Spence wuu booday oo kabaha ayuu ka tagay. Taasi waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan ku qabto isaga oo ku guda jira dambi ah in aan cuno kab.
liiska eyda eyda az
Weli shilal badan oo sanduuq ah ma jiraan tan iyo maalintii ugu horreysay ee aan guriga la tagno Spence mana uusan aadin musqusha guriga dhexdiisa tan iyo usbuucii hore (garaac alwaax). Waxay ahayd kuleyl dhab ah oo qoyan banaanka waxayna ardaygu cadeeyay in haduu banaanka ku fooraro inuu guriga imaanaayo. Wali laguma aamini karo gudaha sida eey duqoobay. Waa in banaanka loo soo bixiyaa isla marka uu cuno oo la fiiriyaa calaamadaha ay tahay inuu baxo sida ku wareegida, ku aadida albaabka ama ku urinta hareeraha. Waxaan isaga kaxeynaa dhowrkii saacadoodba saacad kasta ha noqotee inuu hurdo mooyee. Markuu tooso waa in banaanka lagala baxaa.
Uma maleynayo inaan garaacay alwaaxa si adag. Spencer wuxuu aaday albaabka cidina ma ogaan. Waxa uu ku foorarsaday sagxadda tuurista ee albaabka hore. Taasi waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu saxaroodo marka lagu daro habeenki ugu horreeyay qafiskiisa. Waxaan go'aansanay inaan roog cusub u iibino albaabka hore maadaama uu isaguna dusha ka fiiqay. Waan nadiifinay, si kastaba ha noqotee waxaan u maleynayaa in urta wali raagtay. Farxad waxay ahayd kaliya roog yar oo si fudud oo raqiis ah loogu badalay.
Hagaag waan hubaa inaan jinx naftayda sameeyay anigoo ka fikiraya sida wanaagsan ee Spence u ahaa tababbar dheriga. Waxay ahayd inaan xoogaa ordo oo caruurta u sheego inay daawadaan eeyaha inta aan maqanahay. Waxaan guriga ugu imid tan dhexdeeda dabaqa qolka fadhiga.
Laba jeer Spencer ayaa u soo gudbay kombuyuutarkayga oo aan ku dhaygagay nalalka. Markii ugu horreysay waxba kamaan odhan isaga ilaa uu kaliya eegay oo iska tegey. Markii labaad wuxuu umuuqday xoogaa xiise badan waxaanan ku iri iska daa. Waxaan ka baqay inuu goor dambe go'aansado in kumbuyuutarkaygu yahay toy uu isagu leeyahay. Spence wuu ka fogaaday. Waa inaan isha ku hayaa taas. Ma sii wadi karo qoritaanka cusbooneysiinta Spence haddii ardaygu cuno kumbuyuutarka!
Ku celcelinta ku sugida Albaabka
Amie waxay ku celcelisaa in Spence ay albaabka ku sugto inta aysan bannaanka aadin xirfad wanaagsan oo xagga nabadgelyada ah oo aysan u yeelan eeygaaga bool sababtoo ah albaabku wuu furan yahay. Bruno waa aqoonyahan hore oo aan xirneyn oo wuxuu la sugaa Spence.
Waxaan banaanka ugu soo baxay Spence si aan u kaadiyo. Markiiba wuxuu bilaabay inuu ordo waana markii aan xaqiiqsaday inay shimbiraha hortiisa yaalliin! Aad ayaan ugu fogaaday si aan u sameeyo nooc kastoo jir ah laakiin waxaan bilaabay inaan xaggiisa u ordo, 'haye! Haye! Rrrrrrrrrrr !!! ' Spence gadaal ayuu u dhacay waxaanan isla markiiba dib uga laabtay si aan ugu wargaliyo intaas oo kaliya oo aan doonayay-inuu isaga joojiyo cayrsashada. Spence ayaa go'aansaday inuu saxarada taas bedelkeeda. Waxaan ogaaday in haddii aan ku ciyo isaga uu si fiican u jawaabo. :)
Ey daalan waa eey fiican
Waxaan ogaaday inaanay waxba ku daalineyn eeyga sida loo socdo socodka, halkaas oo eeyaha oo dhan ay ku ciribtirmaan xadhigga. Spencer wuxuu lugeeyaa subax kasta iyo mid kale habeenki, iyo badanaa galabtii (mararka qaarna wuu badan yahay). Waxaan la sameynaa noocyo kala duwan oo socod ah isaga, laga bilaabo ciribtirka xarig ilaa cidhib la'aan xarig, ilaa socod kaynta u oggolaanaya inuu ugaadhsado agagaarka xarkaha Bruno. Socodka uu ugaadhsado isaga iyo Bruno kaynta furan wuxuu daboolayaa dhul aad u faro badan wuxuuna sameeyaa orod badan iyo adeegsiga sankiisa. Markii aan ka soo laabanno socodyadan wuu daalanaa, si kastaba ha ahaatee maskaxdiisu aad bay u kacsan tahay diyaarna uma aha inuu seexdo. Bruno iyo Spence badiyaa way ciyaaraan markaan soo laabano. Maskaxdoodii waxaa la ciir-ciiraya reynreyn.
Socodka meesha eeyaha oo dhan lagu xardhay, mudada aan jimicsiga leenahay waa isku mid, sikastaba eeyadu way socdaan, ma ordaan. Way daba socdaan. Looma ogola inay ku hor socdaan qofka haysta xadhigga waxaanuna ilaalinaynaa dhammaan eeyaha nala socda marka ay marayaan eeyaha kale. Bar iyaga inay iska indha tiraan oo ay socodkooda uun sii wadaan. Waxaan daboolaynaa dhul yar isla waqtiga isku midka ah. Markii aan ka soo laabanno mid ka mid ah noocyada socodka dhammaan eeyaha isla markiiba waa seexdaan. Majiraan ciyaar xiiso leh. Eeyaha ayaa la garaacayaa oo kaliya waxay doonayaan inay seexdaan.
Waxay u egtahay wax qariib ah oo haddii qof uu ii sheegi lahaa tan toban sano ka hor anigu ma hubo inaan rumaysan lahaa iyaga. Laakiin, waa run. Markaad ey ku dhex socoto hoggaan, ka yeel ciribta cidhib, adoo dejinaya oo ku raacaya, waxay maskax ahaan u daadinaysaa eeyga sidaa darteed waxa kaliya ee ay doonayaan inay sameeyaan ay tahay inay seexdaan markay soo noqdaan. Kufiican kuwa shaqeeya ama baxa inta lagu jiro maalinta. Waxaan inta badan la joogaa Spence, si kastaba ha noqotee maalmaha waa inaan isaga tago ama maalmaha uu aadayo gaari dheer, waxaan hubinaa socodka subaxda inuu yahay socod baakid ah. Waxay xaqiijineysaa inuu ku faraxsan yahay inuu gurigiisa ku seexdo qashinkiisa intaan ka maqanahay ama aan ku nasanayo gaariga. Spence wuxuu ku socdaa xirmo halka uu ku ciirayo ugu yaraan hal mar maalintii. Mararka qaarkood socodkaas baakadka ahi waa habeenkii halkii subaxnimadu ku xidhan tahay qorshayaasheena maalinta. Haddii aan ogahay inaan leenahay socod xirmo saacad iyo bar ah oo lala qorsheeyay asxaabtey isla habeenkaas ayaan la fuulayaa taa bedelkeeda markaa wuxuu heystaa tamar ku filan socodka baakadka habeenkii. Markuu sii weynaado uma baahni inaan ka walwalayo inaan xoogaa tamar ah u keydsado socodkeenna habeennada asxaabta iyo eeygooda. Waxaan dareemayaa inaan dhabarka saarayo isaga si aan hoos ugu dhigo. :)
Eeyaha u baxa socodka waxay ku socdaan leas halkaas oo ay ku hor socdaan oo ay ku hogaamiyaan bini aadamkooda, iyagoo dhuuqaya hareeraha meeshii ay doonaan, jir ahaan ayey ku soo noqdaan iyagoo daallan, laakiin ma ahan maskax ahaan daal.
Taliska 'Drop it'
13 usbuuc Spence waxay bilaabeysaa inay kajawaabto amarka 'daadiya'. Wuxuu ku maqnaa ardaaga waxaanan ogaaday in wax afkiisa kujiraan. Waan u soo dhowaaday oo waxaan ku idhi, soo tuur. Ardaygu dhab ahaantii wuu ku tufay dhulka oo wuxuu sugayay inuu arko waxa xiga ee aan sameyn doono. Intaan foorarsaday ayaan soo qaatay wixii uu haystay. Dabcan waxay ahayd gabal saxaro ah! Spence wuxuu bilaabay inuu dabadiisa ku ruxo wareegyada. Ma aqaano haddii ay saxaradiisu ahayd, tan Bruno ama bisadaha, laakiin waxaan u maleynayaa in saxaro ay tahay saxaro. Caqli!
Alla hoogay, Spence, hadda maxaad haysaa ?!
'Tuur!' Oh hoogay, waa dildilaac, oo qalalay tol dhintay. Laba Jibaar! Waxyaabaha ay tahay inaan taabto adiga dartaa. Taas isii!
Banaanka ayaan la joogay Spence. Guineasyada ayaa sidoo kale halkaas ku sugnaa. Hal ilbidhiqsi ayuu Spence i daba socday kii ku xigana wuxuu ku jiray baacsiga kulul ee shimbir! 'Haye!' Erayadaydu waxba ma qaban doonaan markan Spence wuxuu ku sugnaa aagga. Waan ku orday isaga, si kastaba ha noqotee ma doonayo inaan qabsado markan, laakiin Spence wuxuu ku socday xawaare uu kaliya ku qaban karo shimbirta. Waxaan ugu soo dhawaaday Spence oo waxaan sameeyay waxa kaliya ee aan ka fekeri karo, waxaan ku tuuray Bruno's Illusion collar, oo aan hayey, asaga. Dhibco! Waxay kaga dhacday dhinaca. Anigu uma aanan tuurin si adag, kaliya ayaa igu filan inaan taabto oo aan fiiro gaar ah u yeesho. Spence wuxuu istaagay joogsi taraafikada. Waxaan u dhaqaaqay xaggiisa oo aan u janjeerayaa xagga hore illaa uu ka muujiyo astaamo u dhiibistiisa isagoo fadhiya, madaxiisa hoos u dhigaya oo nasanaya. Kadib waxaan dib ugu laabtay si aan ugu wargaliyo intaas oo dhan waxaan doonayay. Waxaan ku maqnayn halkaas saacada xigta shimbiraha Spence oo kaliya ayaga fiirisay oo aniga igu soo noqotay Wuxuu bilaabay inuu fahmo in cayrsashadooda ay ka baxsan tahay xadka. Dagaalkan shimbiraha weli ma dhammaan, hase yeeshe.
Safarka Vet Degdega ah
Waxaan ogaaday Spencer inuusan sifiican u dareemaynin markuu cuni lahaa cashadiisa. Sidoo kale isagu ma lahayn rabitaan ah inuu ku calaliyo calal cusub oo cusub si aan isaga uga duwanayn. Maalintii hore ayuu qabtay mid kale oo dhintay, rah qudhmay oo liqay! Waxaan eegay afkiisa inaan isku dayo inaan helo, laakiin waa la waayey oo afkiisu wuxuu urayaa sida bakhtiga qudhmay. MAHAD! Hadda oo uusan fiicnayn waxaan ka walwalayay lafaha rahyada caloosha gudihiisa. Spence aad ayuu u daalay laakiin ma uusan dooneyn inuu jiifo oo wuu cabaadayay wuxuuna bilaabay inuu ruxo. Waxay ahayd goor dambe oo habeenimo ah sidaa darteed waxaan geynay dhakhtarka xoolaha si aan u hubino. Raajooyinka caloosha ayaa caadi ku soo noqday. Markii teknolojiyadda dhakhaatiirtu ay ku soo celinaysay qolka ka dib markii ay heshay raajooyinkeeda ayay is taagtay Spence gadaashiisa, iyada oo isku dayeysa inay ku celiso inuu ku noqdo qolka iyada ka horreeya. Spence ayaa istaagay iridda laga soo galo, iyada oo aan doonaynin in ay soo gasho qolka iyada ka horreeyay. Aad ayaan ula dhacay ardayga. Xitaa isagoo calool xanaaqsan ayuu xasuustay hab dhaqankiisii.
Spence wuxuu dhowr jeer ku dhacay shuban biyoodka taasoo iga dhigtay inaan ka fekero rah qudhmay sida uu urayo! Laba Jibaar! Waxaa lasiiyay dheecaano faayb ah oo maqaarkiisa hoostiisa si looga hortago fuuqbaxa waxaana loo diray guriga isaga oo wata daawooyin qaar.
Waa 2:00 subaxnimo Spence wuxuu jiifaa sariirta eyga oo ku xigta Bruno. Sariirta eyga ayaa u oggolaaneysa inuu qeybtiisa kore kor u qaado sababo la xiriira dhinacyada sare, halka qafiskiisa ay ku qasbeyso inuu jiifsado wax uusan ku qanacsaneyn inuu sameeyo. Waxaan ka fekerayaa inaan ku riixo sariirtaas weyn eeyga sariirtiisa si aan u arko haddii aanan heli karin ugu yaraan dhowr saacadood oo hurdo ah. Uma oggolaan karno inuu kuuskuus shuban ka soo baxo qafiskiisa, laakiin ma doonayo inuu ku seexdo guri haddii uu ku xanuuno.
Nope, sariirta eeyga kuma habboona. Halkii ayaan ka helay bac hurdo oo le'eg oo cunug ah oo aan laalaabay sidaa darteed waxaa lagu sara kiciyay geesaha taasoo u oggolaatay Spence inuu xoogaa isa soo taago. Sida muuqata way kufilanayd maxaa yeelay wuxuu dib ugulaabtay si toos ah hurdo. Waxaan dhigay kormeeraha fiidiyowga isaga oo tilmaamaya si aan si fudud u arko haddii uu fiican yahay. 2:30 a.m., goodnight, all.
Spence wuxuu joogi jiray 7:00 subaxnimo sidii caadiga ahayd, wuxuuna dib ugu soo laabtay qaabkiisii ​​hore. Shuban-biyood dambe ma jiro, tuur dambe ma jiro ilaa maanta wuxuu la ciyaarayaa Bruno oo xitaa wuxuu bilaabay inuu ku ciyo bisad. Haa, dib ugu noqo jirkiisii ​​hore. Dareenka, FADLAN jooji cunista waxyaabaha dhintay, saxarada iyo wax kasta oo karaahiyo ah oo sankaagu ka heli karo dhulka!
Waxaan bilaabay inaan diyaariyo quraacda eeyaha. Bruno sidii caadada u ahayd wuu iska dhaqaaqay wuuna jiifsaday isagoo sugaya. Spencer wuu fadhiistay oo daawaday. Xoogaa ka dib wuu samray wuuna ciyey, 'Shhhh!' Waxaan sidan yeelnay dhowr jeer oo kale ka hor inta uusan istaagin. Waan siin kari waayey baaqulikiisa cuntada ilaa uu ka joojiyo cabaadka. Wuxuu ubaahanyahay inuu barto samirka iyo asluubta. Cunto ma dawarsatid. Waad sugeysaa Sugiddu waa jimicsi maskaxeed oo wanaagsan eey kasta.
madow iyo caddaan pitbull barbaraha
Waxaan furay albaabka hore si aan Spence uga baxo. Spence ayaa bidix u aaday sariirta eyga waxaanan ku sigtay in aan xiro albaabka oo aan dib ugu laabto markii aan ogaaday in ka dib markii uu fadhiistay ay wax runti dareenkiisa lahaayeen. Midig ayuu u jeeday. Dhanka midig ayaan u leexday oo waxaan arkay wuxuu fiirinayo - mid ka mid ah digaagteenna. Waa loo ogolaaday inuu fiiriyo, sikastaba waxaan sugayay bal inaan arko inuu qaab kale uga jawaabi doono. Dhowr ilbiriqsi kadib Spence wuxuu bilaabay inuu udhaqaaqo dhankaas. Midkani wuu fududaa. Waxaan u dhexeeyay Spence iyo shimbirta. Hore ayaan u soo dhaqaaqay oo jidhku wuu xannibay. Wuxuu u dhaqaaqay dhanka midig, anigana waxaan u dhaqaaqay dhanka midig. Wuu i soo eegay oo waxaan siiyay mid ka mid ah muuqaaladayda diidmada ah. Jirka Spence wuxuu ka soo baxay qallafsanaan iyo feejignaan si loo dabciyo, laakiin wali waa xiiseynayaa. Tani waxay ii sheegtay inuu fahmay waxa aan sheegayay. Waxaan ku lahaa iska daa shimbirta kaligeed.
Digirtii ayaa ka dhaqaaqday balbalada. Maaddaama Spence uusan ku jirin xaalad xamaasad leh halkaas oo uu umuuqday inuu wali doonayo shimbirta-dabadiisa ma taagna, madaxiisana kor uma uusan qaadin oo wuu faanaa-waxaan u oggolaaday Spence inay si deggan u daawato fasaxa iyada. Xaqiiqdii waa inaan isha ku hayaa Spence iyo shimbiraha.
U diyaar garowga Afarta Luulyo
Subaxnimadii Afaraad ee Julaay waxaan hubiyey socodkeena subaxa inuu ahaa socod baakid ah oo eey kasta cidhibtiisu ka muuqato si uu ugu daaliyo si buuxda, maskax ahaan iyo jidh ahaanba. Markasta oo ay daalaan, ayay sifiican u awoodidoonaan dhamaan boomaantooda ay maqli doonaan maalinta oo dhan.
Waxaan ku hakaday irrid kasta si aan u siiyo Spence fursad ay isugu daydo oo ay badhida kaga hor dhigto. Maya maya cunuggu wuxuu umuuqday inuu leeyahay akhlaaqdiisa.
Spence wuu joojinayay inta uu ku jiray xadhigga xoogaa bilowga socodka. Dib ayuu u sii eegay dhanka jihada aan ka nimid, dhowr jeer ayuu istaagay oo hareerahiisa eegay sida uusan hubin sidaas. Waqti kasta oo aan siiyo ilbiriqsi, ka dibna waxaan ku dhiirrigeliyey inuu dhaqdhaqaaq sii wado, anigoo siinaya jiido yar. Taasi si fiican ayey u shaqeysay. Hal mar ayaan go’aansaday inaan tijaabiyo. Waxaan joognay aag amaan ah waxaana sugay inta uu socodkeyga ka joogsanayo. Markuu sidaa yeelay ayaan xadhiggiisa ka tegey oo waan sii waday. 'Haye i sug!' Spence wuu orday si uu u gaadho xidhmadiisa. Waxaan soo qaatay xadhigiisa oo waan sii waday. Xoogaa ka dib Spence wuxuu galay aaggii socodka wuxuuna joojiyay joogsigii.
Ka dib markii Spence uu soo galay aaga lugaynta iyada oo aan istaagin ayaan ka shaqeeyay arintiisa ku saabsan leefleex eeyaha kale ee ku jira baakadka inta uu socdo. Marar badan oo hore ayaan ku saxay dhaqankan maadaama eeyaha waaweyn aysan jeclayn in afkooda leefleeco inta ay socdaan. Maanta jiidjiid yar oo fudud oo hadhow uun ah 'Hey!' joojiyay oo socodkiisi kusii waday. Markii ugu horreysay ee uu bartay sida loogu dul socdo xarig waxaan u daayay dhaqankan inuu ku sii siqayo maadaama uu helayay Spence oo socda, si kastaba ha ahaatee wuxuu hadda fahmay waxa ay tahay qoorta iyo xariggu wuxuuna fahamsan yahay in baakadu ay wada socoto inta iyaga lagu jiro.
Markii aan ku soo laabannay raadkii weynaa ee aan ku soo laaban jirnay guriga ardaygu wuu daalay, laakiin wali waa inaan guriga ka dhigano oo daalku wuxuu ahaa barta socodka oo dhan. Waxay ahayd aag ammaan ah waxaanan ka furay xarigga ardayga si aan ugu oggolaado inuu raaco. Spence waxyar gadaal ayuu uga dhici lahaa markaa xawaareynayaa si uu ula qabsado. Way uga fududahay isaga intii uu joogi lahaa xawaare xawli joogta ah. Mar labaad ayaan u soo kaxayn doonaa iyaga oo galabti socod ah si ay u fiicnaadaan oo ay u daalan yihiin caawa.
Falcelinta ku saabsan rashka
Spencer wuxuu umuuqday inuusan dan ka laheyn rashka. Waxaan ka taxaddarnay inaanan siin wax kalgacal ah, haddiiba ay dhacdo. Hadduu bilaabay inuu dareemo kalsooni la'aan oo aan salaaxnay, waxaan u sheegi lahayn inaan hubin waa sidii aan doonaynay inuu noqdo. Sikastaba eygu wuxuu dareemayaa waqtiga aad kalgacal siiso waa waxa uu u maleeyo inaad rabto inaad dareento. Waxa eeyadu u baahan yihiin inta lagu jiro xilliyada cabsida ayaa ah maskax xoog badan oo laga quudin karo. Qof ay u arki karaan inuu la wareegayo xirmada si loo hubiyo badbaadadooda. Ma aha qof qiil ka dhigaya cabsidooda.
Bruno, dhanka kale, wuxuu ku dhex gurguurtay gudaha sanduuqa yar ee Spencer oo halkaasuu ku hoyday habeenkii.
Aniga oo aan is ogayn ayaan qalad la galay Bruno the Feer markii uu jiray 2 1/2 bilood . Waxaan joognay baarkin madadaalo iyo duufaan gaaban. Dhammaanteen waxaan u baxnay gabbaad, Bruno wuxuu ku orday kursiga keydka hoostiisa. Waan soo saaray oo waan qabtay. Dadka hareeraha naga joogaa wey salaaxayeen oo macaan ayey ula hadlayeen. Da'daas aadka u yar Bruno ayaa loo sheegay, haa, ka cabso onkodka waa sida aan rabno inaad dareento. Laga soo bilaabo xilligaas wuxuu ka baqay onkod. Ma aanan fahmin illaa sanado ka dib aan ka akhriyo boggiisa 12-ka toddobaad ee blog sababta uu u cabsanayo oo ay arrintu umuuqatay inay tartiib tartiib uga sii darayso. Waxay u badan tahay sababtoo ah waqti ka waqti dadku waxay ku qosli doonaan duufaankiisa iyo falcelinta shucaaca, taas oo waliba ahayd qaab kalgacal. Eeygu wuxuu dareemayaa inaad faraxsan tahay wuxuuna u qaadanayaa inaad ku faraxsan tahay sida uu dareemayo. Isaguba wuxuu ku maqnaa banaanka markii aan mar qura wada shidnay rashkeena qaar martida qaarna waxay siiyeen jacayl. Intaa ka dib wuxuu ahaa jahwareer in cabaar ah, isagoo ordaya jaranjarooyinka hadaanan guriga joogin, wuxuu isku dayayaa inuu galo qolka jiifka qof, markuu ogyahay inaan xitaa u ogolaanaynin inaan jaranjarada kor u qaadno. Wuxuu iskudayey inuu gaaro halka uduggeennu ugu xoogga badnaa. Bruno wuu ruxin lahaa wax aad u xun oo wuxuu bilaabi doonaa inuu hoos u dhaco.
Isla markii aan isku soo wada duubay sawirka oo dhan oo ku saabsan waxa sababay cabsida Bruno, sidoo kale waxaan isla meel dhigay sawirka sida looga shaqeynayo hagaajintiisa. Intii lagu gudajiray duufaanta waxaan bilownay inaan kasoo qaadno qolka balbalada, lama hadleyno, laakiin waan iska indha tiraynay iskuna dayaynay inaan dareemo xoog gudaha ah inta aan kari karno si aan u tusno inaanan ka baqeynin duufaanka.
Ma aanan helin illaa xaqiiqda ka dib mana aanan oggolaan doonin, laakiin Amie ayaa mar go'aansaday inuu la shaqeeyo isaga oo u kaxeynaya kulaylka onkodka. Qorshaheeda wuxuu ahaa inay daadiso tamarkiisa isla markaasna u ogolaato inuu dareemo sida aysan u baqayn. Taasi runti wax weyn ayey ka caawisay Bruno-na wuxuu joojiyay inuu kor u kaco tillaabooyinka intii aan guriga joogin oo duufaan ku dhacday. Waxaan sii wadeynaa inaan isaga la soo qaadno qolka balbalada inta duufaanku socdo waqti ka waqti iyo Bruno mar dambe ma gariiri doono inta lagu jiro duufaanka ama rashka, laakiin wuxuu raadiyaa mid ka mid ah xubnaha qoyska oo uu ag seexdaa agtooda. Wuxuu sidoo kale bilaabay inuu aado qolka sanduuqa 'Spencer', oo ahaa sanduuqkiisii ​​hore. Waxaan ka taxaddarnaa inaan la hadalno ama ku qoslinno, ku salaaxno ama siinno nooc kalgacal oo keliya hoggaan marka uusan hubin oo ay umuuqato inuu markasta horumar sameynayo.
sawirka boqorka Charles cavalier
eey cad oo indho buluug ah leh
shukulaatada shaybaarka jarmalka qasabka gaaban ee iibka ah
somali mastiff isku-dhafka shaybaarka madow
purebred Cocker Maraykan eey spaniel